Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay aflagaadadii lagula kacay Suubanaheena CSW. | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay aflagaadadii lagula kacay Suubanaheena CSW.
Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay aflagaadadii lagula kacay Suubanaheena CSW.
Previous articleRa’iisul wasaare ku xigeenda dalka oo maanta dhagax dhigay guriga Hooyooyinka ee magaalada Muqdisho.
Next articleMareykanka oo diiradda saaraya carqaladeynta dhaqaalaha ee kooxda Al-Shabaab.